Fepetra ankapobeny amin'ny fivarotana sy fampiasana ny serivisy FiduLink
WWW.FIDULINK.COM > Fepetra
Fepetra ankapobeny - FIVAROTANA - Fampiasana
Tanjona sy ny sakany
1.1. Ireto fepetra ankapobeny amin'ny famarotana sy fampiasana ireto dia natao hitantanana ny fifandraisana ara-barotra eo amin'ny " FIDULINK " mpandraharaha ara-barotra: Suxys Ltd, Company 12706886, Lei: 9845007DF5742FC5K830, IDST CODE: 0HZJ4VL4ECFQ ( Link: https://www.idst-world.com/0hzj4vl4ecfq) , Birao foibe: Wenlock Road, N17GU, London, England, United Kingdom, mailaka: info@fidulink.com, telefaona; +44 (0) 20 32 89 59 99 ("FIDULINK") ( ' FIDULINK.com ») (" MARKETPLACE-FIDULINK.com ») (" APP-FIDULINK.com ») (" MOBILE.FIDULINK.com ») (" Ireo domains sy zana-tany rehetra an'ny .FIDULINK.com ») sy ny mpanjifany (" Mpanjifa "). Miorina amin'ireny fepetra ara-barotra ankapobeny ireny, ny FIDULINK dia hanome ny mpanjifa serivisy isan-karazany toy ny fananganana orinasa (" Fiarahamonina ") ary serivisy fanampiny misy ifandraisany (" Serivisy fanampiny ») ary koa ny fanampiana amin'ny fanokafana kaonty amin'ny banky na ireo mpanome tolotra ara-bola tsy banky (" Fanokafana kaonty na fampidirana banky »).
1.2. Ireo fepetra ara-barotra ankapobeny ireo dia ampahany miavaka amin'ny fifanarahana vita eo amin'ny mpanjifa et FIDULINK amin'ny sonia nomerika amin'ny endrika iray FIDULINK, na nanao sonia an-tserasera tamin'ny alàlan'ny fanamarinana ny baiko amin'ny sehatra FIDULINK na amin'ny taratasy (" Fifanarahana "). Amin'ny alalàn'ny fifanarahana amin'ny FIDULINK dia eken'ny mpanjifa ireo fepetra ara-barotra ankapobeny. Misy ny lisitry ny vidiny sy ny lisitry ny serivisy ao amin'ny tranokala FIDULINK.
1.3. Ireo fepetra ankapobeny hafa izay miala amin'ny, mifanohitra na mameno ireo fepetra ara-barotra ankapobeny dia hoesorina amin'ny fifanarahana rehetra, raha tsy hoe nifanarahana an-tsoratra mazava teo amin'ny Customer sy FIDULINK.
1.4. Raha misy ny fifanolanana eo amin'ireny fepetra ara-barotra ankapobeny ireny sy ny fifanarahana rehetra, ny fepetra voalazan'ny fifanekena dia hanjaka amin'ireo fepetra ara-barotra ankapobeny ireo. Raha sendra misy fifanolanana dia azonao atao ny mifandray amin'ny serivisy fitantanana ny fifandonana ao amin'ny: lawyer [@] fidulink.com
1.5. FIDULINK dia manan-jo hanova ny fepetra ara-barotra amin'ny ankapobeny amin'ny fotoana rehetra misy vokany eo noho eo. Hampahafantarina ny mpanjifa ireo fanovana ireo amin'ny alàlan'ny fampandrenesana navoaka tao amin'ny FIDULINK.com. Ny fanitsiana dia heverina ho eken'ny Client, raha tsy hoe mahazo fanoherana an-tsoratra momba izany i FIDULINK ao anatin'ny efatra herinandro aorian'ny fampandrenesana.
Ny atiny sy ny haben'ny serivisy
Fototra sy fitantanana orinasa sy serivisy fanampiny
2.1. FIDULINK dia afaka manome ny mpanjifa serivisy fampidirana orinasa, ao amin'ny faritra voafaritra ao amin'ny lisitra navoaka tao amin'ny tranokala FIDULINK ( www.fidulink.com ) na ny sehatra (Internet, fampiharana finday na rindranasa takelaka, fampiharana IOS, fampiharana Android). FIDULINK dia mety handamina ihany koa, na amin'ny alàlan'ny orinasa mifandraika amin'ny FIDULINK na antoko fahatelo, ny fanomezana Serivisy fanampiny toy ny fanendrena talen'ny fidusiary, tompon-tany fiduciary, kaonty mpivarotra Internet, logo an'ny orinasa, hajia misy ny orinasa, fitombon'ny orinasa, fahefan'ny mpisolovava, fanamarinana voamarika ary apostille amin'ny antontan-taratasy, fangatahana fahazoan-dàlana, fangatahana fankatoavana, fikarohana trano, fikarohana mpiasa, fikarohana mpiara-miasa, ary serivisy hafa heverin'ny FIDULINK sy ny CLIENT fa ilaina amin'ny famoronana na fananganana orinasan'ny mpanjifa. Ny teny hoe "orinasa mpiara-miasa" dia midika hoe, mifandraika amin'ny FIDULINK, sampana na orinasan'ny FIDULINK na ny sampana hafa amin'ity orinasa mitazona ity, mpisolovava, mpitan-kaonty, mpisolovava, notary ary agents FIDULINK hafa.
2.2. Ny serivisy fanampiny rehetra dia homena amin'ny alàlan'ny fifanarahana manokana misy eo amin'ny Mpanjifa sy ny mpamatsy Fanampiny mifandraika amin'izany, afa-tsy ny tombo-kase, hajia sy logo, fanamarinana noterena ary apostille.
2.3. Ireto manaraka ireto dia tafiditra ao amin'ny fisoratana anarana fonosana orinasa: tompon-trano 4, talen'ny 2, tompon-trosa fanampiny na talen'ny fakana takiana dia tokony hosoratana ho an'ny fisoratana anarana arakaraka ny fahefana.
Kaonty Banky & Fampidirana an-tsokosoko & Wallet
2.3. FIDULINK amin'ny fangatahana dia afaka manampy ny mpanjifa mifandraika amin'ny fampidirana banky na ara-bola, ny fanokafana kaonty amin'ny banky, andrim-panjakana, andrim-bola, na mpamatsy tolotra tsy banky, mpamatsy kitapom-bola, (" Banky na andrim-panjakana "). Amin'ity toe-javatra ity, FIDULINK dia mety manolotra lisitry ny orinasa ny mpanjifa, fa ny mpanjifa kosa no tompon'andraikitra amin'ny safidin'ny orinasa miankina amin'ny fanekena ny fananganana sy ny fanarahan-dalàna an'ny mpanjifa sy ny orinasany, ny sampana, ny sampana, ny solontenan'ny varotra birao (Mijoro tsara, hetsika, fanohanana, toerana, sns.). Ny mpanjifa dia afaka misafidy orinasa iray avy amin'ny lisitry ny orinasa nomen'ny FIDULINK na ny fananganana antoko fahatelo (amin'ny fangatahana fotsiny ary tsy misy antoka fa eken'ny orinasa ny fisokafan'ny kaontin'ny orinasan'ny mpanjifa) ao anatin'ny fetra roa fangatahana sy fandavana ny ny mpanjifa sy / na banky sy / na orinasa). Ny fanatanterahana mahomby ny serivisy fanampiny toy ny carte de crédit, ny boky fanamarinana na ny fidiran'ny banky amin'ny Internet dia tsy azo antoka ary atolotra araka izay misy ary tsy misy fiantohana. Ny serivisy dia azo ampiasaina amin'ny tanjona ara-dalàna ihany araka izay voafaritry ny lalàna manan-kery sy ny eken'ny mpanjifa hanome ny fampahalalana rehetra mifandraika amin'ny asany sy ny niandohan'ny volany, ary ny fanontaniana na fampahalalana hafa napetraky ny orinasa na FIDULINK.
2.4 SUXYS Ltd sy FiduLink.com dia tsy manolotra serivisy Wallet na E-Wallet, ny serivisy Wallet na E-Wallet izay hita ao amin'ny tranokalan'ny www.FiduLink.com sy / na subdomain ary domains hafa dia serivisy an'ny SUXYS International Limited . Manaiky ny mpanjifa fa tsy azony atao amin'ny toe-javatra rehetra na karazana manohitra an'i FiduLink.com na SUXYS Ltd momba ny fisoratana anarana sy ny rohy fidirana ao amin'ny tranokala FiduLink.com. Ny mpanjifa dia mamoaka ny FiduLink.com sy SUXYS Ltd amin'ny fanenjehana rehetra raha misy ny fifanolanana amin'ny orinasa na andrim-panjakana ara-bola na banky hafa izay nahazoany fampidirana noho ny fangatahany avy amin'ny orinasany.
Zo handavana serivisy
FIDULINK.com sy na SUXYS Ltd dia manan-jo handà ny rehetra na ny ampahany amin'ny serivisy omeny amin'ny mpanjifa tsy misy antony na fanazavana, ary tsy afaka tompon'andraikitra amin'izany fandavana izany. Tsy misy famerenam-bola azo omena raha misy ny fandavana ny serivisy ataon'ny FIDULINK. Raha tsy ekena ny serivisy dia azonao atao ny mifandray amin'ny sampana misy ny lalàna eto amin'ny: lawyer@fidulink.com.
Na dia miezaka manome FIDULINK fampahalalana marina sy marina aza ny serivisy rehetra, ny fahefana, ny endrika orinasa, ny hetra ary ny fampahalalana hafa mifandraika amin'ny fananganana orinasa, dia tsy manome torohevitra na fampahalalana momba ny (Taxation Personnel naturel, Taxation Personnel Legal, Assembly of Offshore, Assembly onshore-Offshore, famotsoran-ketra ho an'ny olona sy orinasa) Araka izany dia manaiky sy manamarina ny mpanjifa fa tsy nahazo torohevitra ara-dalàna na hetra avy amin'ny FIDULINK na SUXYS Ltd na avy amin'ny FIDULINK Agents (Mpisolovava, Jurisista, mpitan-kaonty) , Agents) na andrim-panjakana hafa na olona voajanahary na ara-dalàna mifandraika amin'ny FIDULINK na SUXYS Ltd. Andraikitry ny mpanjifa ny mahazo antoka fa mandray ny torohevitra rehetra momba ny lalàna sy haba momba ny fananganana sy ny fiasan'ny orinasa izy, ary ny fiantohana fa tsy manitsakitsaka ny lalàna mifehy ny fahefana mahefa izany hetsika izany. Manaiky ary mandray andraikitra ny mpanjifa mba hiantohana ny fiasa ara-dalàna, ara-bola ary ara-pitondran-tena ataon'ny orinasany.
Ny Client dia manome antoka fa tsy hampiasa na inona na inona zony amin'ny fifanekena izy noho ny antony tsy ara-dalàna, vetaveta, maloto fitondran-tena na manala baraka ary tsy hanaratsy endrika an'i FIDULINK. Ny mpanjifa dia mety tsy mampiasa toe-javatra na fampifangaroana ny anaran'ny FIDULINK sy ny FIDULINK Agents, amin'ny ankapobeny na amin'ny ampahany, ho an'ny tanjona ara-barotra. Raha azo ampiharina, ny FIDULINK dia manan-jo hiara-hiasa amin'ny manam-pahefana manadihady ofisialy raha misy ny fiampangana azy ho manitsakitsaka ny mpanjifa.
Famotsiam-bola sy fahazotoana
Ny mpanjifa dia hanome ny FIDULINK izay fampahalalana heverin'ity farany fa ilaina mba hanarahan'ny orinasa ny lalàna mifandraika amin'ny ady amin'ny famotsiam-bola sy ny fahazotoana tokony hatao. Andraikitry ny mpanjifa ny miantoka fa marina ny fampahalalana nomena an'i FIDULINK. Ny mpanjifa koa dia nanambara tamin'i FIDULINK fa ny entana na ny vola ampidirina amina orinasa iray dia tsy mandrafitra, na mivantana na ankolaka, ny valin'ny asa ratsy na hetsika tsy ara-dalàna hafa. Mba hamelana ny FIDULINK hanefa ny adidiny ara-dalàna, ny Mpanjifa dia hampahafantatra amin'ny FIDULINK amin'ny fomba feno sy haingana momba ny fiovana rehetra mahasoa ny mpandray tombony ara-toekarena, ireo tompon-trosa ary ireo talen'ny orinasa. Ireo mpahazo tombony ara-toekarena natolotry ny Mpanjifa dia hanao sonia ara-batana na ara-nomerika “endrika” na “endrika elektronika” iray takian'ny Fifanarahana. Ny mpanjifa dia hampahafantatra an'i FIDULINK ny toetoetran'ny hetsika ataon'ny orinasany tsy misy hatak'andro ary ny fanovana rehetra dia hiharan'ny fanekena an-tsoratra nataon'i FIDULINK mialoha. Ny client sy ny shareholder ary ny beneficiaries hafa an'ny orinasa dia tsy maintsy manamarina ny maha izy azy ao anatin'ny 30 andro aorinan'ny famoronana orinasa miaraka amin'ny vahaolana www.IDST-WORLD.com (https://idst-world.com) (Lite na Fanamarihana ambany indrindra + farafahakeliny. Ny fanamarinana ny mombamomba izany dia tsy maintsy atao ho an'ny mpampiasa rehetra. Ny mpanjifa dia tsy maintsy manatanteraka fanamarinana AML sy KYC miaraka amin'ny vahaolana amin'ny www.IDST-WORLD.com (https://idst-world.com) (Lite na Lite + fanamarinana farafahakeliny).
Ny fanomezana antontan-taratasy manohana mifandraika amin'ny fahazotoana mendrika dia mety, indrindra ary tsy feno, dia misy: kopian'ny antontan-taratasy fanamarinana tany am-boalohany, porofon'ny adiresy tsy nisy 3 volana, taratasy momba ny banky, kopian'ny antontan-taratasin'ny orinasa, toy ny ary koa ny niavian'ny fandikan-teny voamarina raha azo ampiharina, fanamarinana notarialy, apôstôlika ary mari-pahaizana nomerika hafa (IDST WORLD). Ny fanamarinana rehetra dia tsy maintsy vonoina arakaraka ny fepetra takian'ny lalàna manan-kery sy araka ny torolàlana avy amin'ny FIDULINK. Ny Client dia manana adidy handefa ny antontan-taratasy takiana mba hahatratrarana ireo adidy amin'ny fahazotoana alohan'ny hanombohan'ny serivisy FIDULINK sy ireo masoivohony, mpisolovava, mpitan-kaonty, mpitsara, masoivoho eo an-toerana.
Ny sarany sy ny fe-potoana fandoavana
8.1. Ny mpanjifa dia manolo-tena handoa ny sarany takian'i FIDULINK rehefa manafatra fonosana ho an'ny orinasany. Ny fandaharam-potoana fandoavam-bola FIDULINK dia hita ao amin'ny lisitry ny sarany navoaka tao amin'ny tranokala FIDULINK (www.fidulink.com ) sy ireo lampihazo. Ho fanampin'ireo fandaniana voalaza ao amin'ilay tranonkala dia nanaiky ny mpanjifa fa tokony hamerina ny vola lany rehetra, ao anatin'izany, nefa tsy ferana, ny vola lany nandritra ny fiantsoana na fandraisana anjara tamin'ny fivorian'ny talen'ny talen'ny orinasa, ny tompon'andraikitra na ny sekretera, ny vidin'ny fiantsoana. na ny fanatrehana fivoriana fivoriana tsy manam-paharoa an'ny orinasa, ny vidiny mifandraika amin'ny fanomanana ny fampitana fampandrenesana na fanambarana ary ny vidiny hafa rehetra mitovy amin'izany. Ny FIDULINK dia manomboka dingana famonoana aorian'ny fahazoana ny fandoavana ny sarany.
Ny sarany sy ny sarany rehetra dia aloa amin'ny vola natolotry ny FIDULINK, ny vola azo, GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, TRY, PLN, RON, ETH, BTC (tahan'ny fifanakalozana mifototra amin'ny vola EUR) . Ny mpanjifa dia tsy mahazo alalana hitazona ny sarany sy ny vidiny aorian'ny fitarainana mifandraika amin'ny serivisy, fiantohana na andraikitra. Toy izany koa, ny zon'olombelona rehetra miala amin'ny lafin'ny Mpanjifa dia esorina amin'izany. FiduLink.com manavao ny tahan'ny fifanakalozana matetika amin'ny tranokalany sy amin'ny tsena isan-karazany sy ny fampiharana finday.
8.2 Fandoavana amin'ny Bitcoin. FIDULINK dia manaiky ny fandoavam-bola amin'ny bitcoin miaraka amin'ny Euro ho vola fifanakalozana. Manaiky ny mpanjifa fa ny fandoavam-bola dia mety iharan'ny fanitsiana raha sendra latsaka tampoka ny crypto-asset. FIDULINK dia manana zo handà ny fandoavam-bola amin'ny Bitcoin.
8.3 Fandoavana vola amin'ny Ethereum. FIDULINK dia manaiky ny fandoavam-bola amin'ny Ethereum miaraka amin'ny Euro ho vola fifanakalozana. Manaiky ny mpanjifa fa ny fandoavam-bola dia mety iharan'ny fanitsiana raha sendra latsaka tampoka ny crypto-asset. FIDULINK dia manana zo handà ny fandoavam-bola amin'ny Ethereum.
8.4 fandoavana ny Western Union. FIDULINK dia manaiky ny fandoavam-bola ataon'ny Western Union miaraka amin'ny Euro ho toy ny vola fandefasana. Manaiky ny hitondra ny vidin'ny Western Union ny mpanjifa. FIDULINK dia manana zo tsy handà ny fandoavan'ny Western Union. Tsy misy afa-tsy amin'ny fandoavam-bola Western Union (Mode Account Transfer Bank).
8.5 fandoavana amin'ny MoneyGram. FIDULINK dia manaiky ny fandoavam-bola amin'ny MoneyGram mampiasa Euros ho sandam-bola famindrana. Manaiky ny mpanjifa hitondra ny vidin'ny MoneyGram. FIDULINK dia manana zo tsy handà ny fandoavam-bola amin'ny MoneyGram. Tsy misy afa-tsy amin'ny fandoavam-bola MoneyGram (Mode Account Transfer Bank).
Fototra sy fitantanana orinasa
8.2. Ankoatry ny sarany isan-taona dia tsy maintsy mandoa vola FIDULINK vola tokana ny mpanjifa hahafahan'ny famoronana orinasa iray ("saram-pandaminana"). Ny saram-pampidirana dia miova arakaraka ny fahefana ary misy ny fanomezana ny birao misoratra amin'ny orinasa (adiresy), ny fanomezana ny maso ivoho ary koa ny antontan-taratasy rehetra hahafahan'ny orinasa miasa amin'ny andro voalohany fiasana. fisoratana anarana, izany hoe: ny taratasy fanamarinana fampidirana navoakan'ny rejisitra eo an-toerana; ny sata; ny fehin-kevitra mifandraika amin'ny fanendrena ny talen'ny fitantanana sy ny fizarana ny fizarana ary ny taratasy fanamarinana fizarana.
Ny sarany isan-taona dia sarany aloa aloa isan-taona aorian'ny fisoratana anarana na fanavaozana ny orinasa. Anisan'izany ny fikojakojana ny orinasa mifandraika amin'ny lalàna eo an-toerana momba ny fahefana ary koa ny fanavaozana ny birao voasoratra anarana, ny maso ivoho voasoratra anarana ary ny saram-panjakana avy amin'ny fahefana voakasik'izany. Tsy azo averina ireo sarany ireo.
Ny Client dia tompon'andraikitra amin'ny FIDULINK amin'ny hetra hafa rehetra toy ny hetra avy amin'ny governemanta, haba, hetra ary fandoavam-bola hafa amin'ny antoko fahatelo ary koa sarany sy saram-pamindrana ny talen'ny mpitantana na tompon'andraikitra amin'ny fitokisana, ao anatin'izany ny fandoavana sy ny fandaniana kely tsy azo hamarinina.
Ny Client dia manaiky ny zon'ny FIDULINK handinika ny sarany isan-taona. Izay fanovana ny rafitry ny sarany dia hampandrenesina amin'ny mpanjifa iray volana farafahakeliny alohan'ny hanombohan'ny serivisy mandritra ny fotoana ifandraisan'ny sarany. Ny mpanjifa dia afaka mandoa ny sarany noho ny FIDULINK mampiasa carte de crédit Visa na MasterCard manan-kery vita amin'ny anarany, na amin'ny alàlan'ny famindrana banky. Ireo mpanjifa izay mandefa any amin'ny FIDULINK ny angon-drakitra carte de crédit (na fitaovana mitovy aminy) ho toy ny fitaovana fandoavam-bola dia manaiky fa ny FIDULINK dia manefa ny carte de crédit -ny momba ny sandan'ny vola sy / na fandaniana, hetra, haba tokony haloan'ny FIDULINK mifandraika amin'ny serivisy ary koa ny fandoavam-bola rehetra azo ekena na fandaniana kely. Manaiky ihany koa ny mpanjifa fa ny FIDULINK dia mety hanoratra sy hampiasa ny angon-drakitra ao anaty karatra mifanaraka amin'ireo Fepetra ankapobeny sy ny Politika momba ny tsiambaratelo.
Fepetra manokana momba ny fandoavana vola amin'ny alàlan'ny carte de crédit NA CREDIT CARD
8.3. Raha misy ny fandoavana ny sarany isan-taona ary tara loatra na eo aza ny faktiora ara-dalàna ataon'ny FIDULINK sy ny fiezahana hampandre ny Mpanjifa izany fanitsakitsahana izany dia nanaiky ny mpanjifa fa ny FIDULINK dia afaka manafatra amin'ny karatry ny mpanjifa (debit na trosa). ny vola tsy voaloa toy izany, ao anatin'izany ny sazy na lamandy apetraka mba hamerenana amin'ny laoniny ny orinasa amin'ny toeran'ny fisoratana anarana tsara.
Amin'ity tranga ity, ny Client dia manaiky ihany koa fa ny FIDULINK dia hanana 60 andro aorian'ny daty fandoavana handoavana ny saram-pisoratana anarana isan-taona mifandraika amin'ny orinasan'ny mpanjifa, ary ny vola ampidirina amin'ny sazy fisoratana anarana dia ao koa misy vola sazy fanampiny mifandraika amin'ny fe-potoana fiandrasana 60 andro.
8.4. HATRANY NY FIVORIANA IZAY antoko fahatelo dia manome fandoavana karatra eo am-pelatanan'ny mpanjifa, ny mpiantoka dia manome antoka ny fandoavam-bola, ary koa ny fampiasana ny karatra sy ny fanomanana ny datin'ny karatra mifanaraka amin'ny Fepetra ankapobeny sy ny politikam-pirenena. NY CUSTOMER dia TOA HITANAO AMIN'NY MPITONDRA HIDITRA ARY HANAO FANAMARIHANA AMIN'NY FANAMBARANA NY MODELIN'NY AZONAO ATAO AMIN'NY FARITRA ITY >>.
8.5. Ny mpanjifa dia mitrosa amin'ny FIDULINK amin'ny vola mitambatra ho an'ny fanomezana ny serivisy mifandraika amin'ny fampidirana amin'ny banky sy ny fanokafana kaonty amin'ny banky. Ireo saram-pitantanana ireo dia azo ovaina amin'ny fotoana rehetra tsy misy fampandrenesana. Ny saram-pandraharahana dia aseho amin'ny GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, PLN, BTC amin'ny safidin'ny mpanjifa amin'ny sehatra FIDULINK. Ny mpanjifa dia tsy maintsy mandoa ny saram-pitantanan-draharaha alohan'ny hanombohan'ny FIDULINK manao ny serivisy sy hifandray amin'ny toeram-pananganana. Ny mpanjifa dia afaka mandoa ny saram-pitantanana amin'ny FIDULINK amin'ny alàlan'ny carte de crédit Visa na MasterCard manan-kery ary amin'ny anarany, na amin'ny alàlan'ny famindrana banky. Ireo mpanjifa izay mandefa ny angon-drakitra carte de crédit any amin'ny FIDULINK ho fomba fandoavam-bola dia manaiky fa ny FIDULINK dia hanome faktiora ny carte de crédit azy ireo ho an'ny vola feno amin'ny saram-pitantanan-dry zareo nofidiny ho fanampin'ny vidin'ny serivisy mpampita hafatra. Raha angatahina.
Marketplace-FiduLink.com na kaonty mpanjifa App-FiduLink.com
Manaiky ny mpanjifa fa ny FIDULINK dia mamorona kaonty voatokana rehefa mametraka kaonty amin'ny Internet. Ny mpanjifa dia manaiky ary manome toky an'i FIDULINK fa miantoka fiarovana tanteraka amin'ny fidirana amin'ny kaontiny izy. Ny mpanjifa dia mamoaka ny FIDULINK sy ny SUXYS Ltd amin'ny andraikitra rehetra raha sendra ny tsy fitandremana sy ny tsy fanarahana ireo singa ilaina amin'ny fiarovana ny tenimiafiny na fidirana fidirana. Raha sendra misy fanitsakitsahana kaonty na fampiasana hosoka dia eken'ny mpanjifa fa ny FIDULINK dia manakana ny fidirana amin'ity kaonty ity tsy misy hatak'andro ary tsy manome antony ny mpanjifa. Manaiky ny tompon'andraikitra amin'ny fiarovana ny kaontiny sy ny fidirany fotsiny ny mpanjifa fa izy irery no manana ny teny miafiny sy ny fidirany.
8.6. Ny Client dia manome proxy an'ny FIDULINK ary manamarina fa ny olona rehetra hotendrena ho talen'ny orinasa iray araka ny taratasy fangatahana natolotra an'i FIDULINK ary izay mbola tsy nanao sonia fanambarana momba ny fanekena ny mandat dia nanaiky tokoa ny andraikiny amin'ny maha talen'ny ao amin'ny fotoana fisoratana anarana ny orinasa ary ny olona voajanahary tsirairay voatendry ho talen'ny dia nahatratra ny 18 taona. Ireo koa dia manamarina fa ny mpitantana dia fotoanan'ny fanekena mialoha momba ny fanendrena azy sy ny adidiny.
8.6.1 Ny mpanjifa dia manome alalana an'i FIDULINK ary manamarina fa ny olona rehetra voatendry ho talen'ny orinasa iray araka ny taratasy fangatahana natolotra an'i FIDULINK ary mbola tsy nanao sonia fanambarana momba ny fanekena ny birao dia nanaiky tokoa ny biraon'izy ireo ho talen'ny ny fotoana fisoratana anarana ny orinasa ary ny olona voajanahary voatendry ho talen'ny dia nahatratra 18 taona. Ireo koa dia manamarina fa ny talen'ny fanekena amin'ny fanekena mialoha ny fanendrena azy sy ny adidiny.
Fanendrena ny mpitan-tsoratra
8.6.1 Ny Client dia manome alalana an'i FIDULINK ary manamarina fa ny olona rehetra hotendrena ho sekreteran'ny orinasa iray araka ny taratasy fangatahana natolotra an'i FIDULINK (Adidy sy fisoratana anarana an-tery raha misy ny talen'ny serivisy voatendry) ary izay mbola tsy nanao sonia ny fanambarana ny fanekena ny birao dia nanaiky tokoa ny asany amin'ny maha sekretera azy tamin'ny fotoana nisoratana anarana ny orinasa ary ny olona voajanahary tsirairay voatendry ho talen'ny dia lasa 18 taona lasa. Ireo koa dia manamarina fa ny sekretera dia lohahevitry ny fanekena mialoha ny fanendrena azy sy ny adidiny.
Serivisy mpandray anjara hafa
8.7. Ny mpanjifa dia manana trosa amin'ny FIDULINK amin'ny vola tsy azo averina amin'ny laoniny ho an'ny fanomezana ny serivisy mifandraika amin'ny fifandraisana amin'ireo mpanome tolotra antoko fahatelo na fanampiana amin'ny fangatahana fahazoana ireo serivisy ireo avy amin'ny mpamatsy antoko fahatelo. Io vola io dia nangonina manokana hanefana ny vidin'ny FIDULINK. Niaiky ny mpanjifa fa ny FIDULINK dia tsy ho antoko eo amin'ny fifamatorana fifanarahana napetraka eo amin'ny Mpanjifa sy ny mpanome tolotra antoko fahatelo. Ny Client dia nanaiky fa ny FIDULINK dia mety hahazo première fampidirana orinasa avy amin'ny mpamatsy tolotra antoko fahatelo raha eken'ny Client sy ny Client mazava tsara ny fanekena ny fangatahana famerenam-bola.
Fifandraisana sy torolàlana
Ny Client sy FIDULINK dia afaka mifandefa torolàlana, fampandrenesana, antontan-taratasy na fifandraisana hafa amin'ny alàlan'ny mailaka, mailaka, amin'ny alàlan'ny vavahady Internet FIDULINK natokana na amin'ny fax, SUBJECT, izay azon'i FIDULINK alefa tatitra momba ny fandaniana na ny sarany ampiarahin'ny mailaka. Ny mpanjifa sy ny FIDULINK dia tsy maintsy mitazona ny torolàlana rehetra, ny fampandrenesana, ny antontan-taratasy na ny fifandraisana hafa rehetra ho porofo. Ny fifandraisana rehetra natao ho an'ny FIDULINK dia halefa any amin'ny birao foibeny na amin'ny adiresy hafa rehetra izay efa nampandrenesin'ny FIDULINK tamin'ny mpanjifa an-tsoratra tamin'ny fotoana rehetra ary ny fifandraisana rehetra natokana ho an'ny Mpanjifa dia halefa any amin'ny adiresy na amin'ny adiresy hafa ankoatry ny Mpanjifa. dia hampandre an'i FIDULINK an-tsoratra amin'ny fotoana rehetra, ao anatin'izany ny torolàlana poste restante izay tsy maintsy ekena an-tsoratra. Koa satria ny FIDULINK dia tsy maintsy afaka mifandray amin'ny Mpanjifa hatrany raha ilaina izany, ny Client dia mandray andraikitra hampahafantatra avy hatrany an'i FIDULINK raha manova ny adiresy, ny adiresy mailaka na ny nomeraon-telefaona / fax-ny izy. Raha toa ka mikasa ny hamarana ny serivisy FIDULINK ho an'ny orinasa manokana na orinasa maromaro ny mpanjifa dia alefa any amin'ny info@fidulink.com .
Fanodinana data sy fiarovana
10.1. FIDULINK dia hikarakara angona manokana izay, araka ny famaritana ny General Data Protection Regulation (RGPD / GDPR), izay misy fampahalalana mifandraika amin'ny olona voajanahary fantatra na azo fantarina, izay antsoina koa hoe "lohahevitra data". Ny olona voajanahary azo fantarina dia olona iray izay azo fantarina, na mivantana na tsy mivantana, indrindra amin'ny alàlan'ny firesahana amin'ny mpamaritra toy ny anarana, isa fanondroana, data data, mpamaritra fifandraisana, na amin'ny antony iray na maromaro izay manokana amin'ny ny maha-ara-batana, ara-batana, fototarazo, ara-tsaina, toekarena, kolontsaina na ara-tsosialy an'ity olona voajanahary ity.
Ny fanodinana angon-drakitra dia midika hoe misy fiasa na andiana asa atao amin'ny angon-drakitra manokana, na mandeha ho azy izany na amin'ny boky torolàlana, toy ny fanangonana, firaketana, fandaminana, fananganana, fitehirizana, famerenana, fifampidinihana, fampifanarahana na fanovana, fampiasana, fifandraisana amin'ny alàlan'ny fandefasana, fanaparitahana, famafana na fanimbana tahirin-kevitra toy izany, ary koa ny fanomezana, fandaminana na fitambaran'ny angona, ny fameperana azy ireo na famafana.
Ny mpandray ny angon-drakitra manokana dia misy ireo orinasa ao amin'ny vondrona FIDULINK izay miasa ho mpanampy na mpanampy, maso ivoho monina amin'ny faritra mifandraika amin'ny serivisy, ireo mpamatsy IT sy fifandraisan-davitra antsika, mpamatsy antoko fahatelo hafa ao anatin'izany ny banky izay ananan'ny mpanjifa. maniry mafy ny haseho azy, ny fisoratam-bolan'ny orinasa, na ny manampahefana. Ny tsirairay amin'ireo famoahana ireo dia hatao mifanaraka amin'ny GDPR ary ny fifandraisanay amin'ny antoko fahatelo dia fifanarahana, izay anoloran'ny andaniny sy ny ankilany ny adidin'ny GDPR toy ny adidy tsiambaratelo ho an'ireo izay manodina ny angon-drakitra manokana momba ny lohahevitra angon-drakitra.
Mba hanarahana ny adidy fantatry ny mpanjifanao ("KYC") sy hahazoana antoka fa omena tsara ny serivisy, ny tahirin-kevitra voahodina dia ahitana ny antsipirian'ny Mpanjifa, toy ny anarana voalohany sy anarana farany, zom-pirenena, daty nahaterahana, fonenana ary adiresy fonenana, nomeraon'ny pasipaoro, daty manan-kery momba ny pasipaoro, ary angon-drakitra ifandraisan'ny olona azo fantarina, ary koa antontan-taratasy manamarina izany data manokana izany sy ny torolalan'ny mpanjifa momba ny serivisy. Ny fizotran'ny KYC dia tanterahina miaraka amin'ny fampiharana ISDT WORLD (www.idst-world.com).
Ny mpanjifa dia manana adidy hitazona ny mombamomba azy manokana miaraka amin'i FIDULINK hatrany hatrany mandritry ny fifandraisana nifanaovana, ary handefa antontan-taratasy manohana mifandraika amin'ny adidiny hitazona izany hatrany amin'ny endrika atolotry ny FIDULINK.
10.2. FIDULINK na ny maso ivoho monina dia mety manodin-drakitra manokana ho mpifanaraka amin'ny anaran'i FIDULINK, izay, raha ilaina, dia mijanona ho mpanara-maso angona. Ny fampahalalana misimisy momba ny antoko izay ifampizaranay angona dia azo alaina ao amin'ny Politikanay manokana.
10.3. Niaiky ny mpanjifa fa afaka mahazo fampahalalana bebe kokoa izy amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'i FIDULINK na amin'ny fandefasana mailaka amin'i info@fidulink.com . Ny serasera rehetra dia hatao amin'ny teny anglisy. Ny fiteny hafa rehetra dia mety ampiasain'ny FIDULINK amin'ny alalàn'ny azy irery, ho fanajana ny mpanjifa ihany.
10.4. Ampahafantarina ny mpanjifa fa manan-jo hisintona fanekena izy. Ny fanesorana ny fanekena dia tsy misy fiatraikany amin'ny ara-dalàna ny fanodinana alohan'ny fisintonana, na ny ara-dalàna ny fitohizan'ny fanodinana raha misy antony hafa manamarina ny fanodinana, toy ny fanarahana ny adidy ara-dalàna.
Ny Client dia manome antoka an'i FIDULINK fa nahazo fankatoavana feno momba ny lohahevitra data olon-kafa izay misy ny angon-drakitra manokana nalefany tamin'ny FIDULINK avy amin'ny Client, ary io fanekena io dia mandrakotra ny fanodinana amin'ny alalàn'ny FIDULINK ny angona manokana an'ny ity antontan-kevitra momba ny antontan'isa fahatelo ity noho ny antony fanomezana na fanarahana ny adidy am-pahendrena.
10.5. FIDULINK, ny talen'ny asany, ny mpiasa na ny agents, dia takiana amin'ny fitandremana ny angon-drakitra. Na eo aza ny fitandremana rehetra momba ny fiarovana, ny angona, anisan'izany ny fifandraisana amin'ny mailaka sy ny angon-drakitra manokana momba ny vola, dia mety hojeren'ny antoko fahatelo tsy nahazoana alàlana mandritra ny fifindran'ny Client sy FIDULINK. Ho an'ny tanjon'ny fifandraisana amin'i FIDULINK, ny Customer dia mety takiana hampiasa rindrambaiko novokarin'ny antoko fahatelo, ao anatin'izany, saingy tsy ferana amin'ny, lozisialy browser izay manohana ny protokolovan'ny fiarovana angona mifanaraka amin'ny fampiasa ampiasain'ny FIDULINK. .
10.6. Ny fampahalalana omena ao anatin'ity fehezan-teny ity dia midika fampisehoana ampahany amin'ny fiarovana angon-drakitra. Izany dia hazavaina amin'ny antsipiriany bebe kokoa ao amin'ny Politikanay momba ny tsiambaratelo hita ao amin'ilay rohy nomena ho an'ity tanjona ity.
Tsy fahampiana ara-dalàna
Ny mpanjifa dia miatrika ny loza mety hitranga amin'ny fitsarana an-tendrony vokatry ny tsy fahaizan'ny lalàna mifamatotra amin'ny olony na amin'ny mpisolovava azy na amin'ny antoko fahatelo hafa, raha tsy hoe nampitaina tamin'i FIDULINK an-taratasy io tsy fahafaha-manao io.
12.1. Raha tsy misy fitsarana an-tendrony amin'ny fepetra manokana, ny fahasimbana ateraky ny lesoka na ny lesoka nataon'ny FIDULINK, ny talenany, ny mpiasa na ny mpiasan'izy ireo dia tsy maintsy entin'ny Mpanjifa, raha tsy hoe FIDULINK, ny talenany, ny mpiasa na ny masoivohony dia tsy nanao '' tsy fitandremana na hosoka na andraikitra hafa izay tsy azo esorina araky ny lalàna manan-kery. Ny FIDULINK dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fahaverezana mijaly noho ny tsy fahombiazan'ny mekanika, ny fitokonana, ny fanafihana amin'ny Internet, ny fampihorohoroana, ny loza voajanahary, ny fahataran'ny pandemika na ny tsy fahombiazan'ny mpikambana ao amin'ny mpiasa, ny fitantanana na ny mpiambina rehetra amin'ny fanatanterahana ny asany.
12.2. Izay fahasimbana nateraky ny na nipoitra, mivantana na ankolaka, avy amin'ny lesoka, tsy fahombiazana, tsy fitandremana, fihetsika na fanilihana olona hafa, rafitra, andrimpanjakana na fotodrafitrasa fandoavam-bola. ho entin'ny Mpanjifa.
12.3. FIDULINK dia tsy azo raisina ho tompon'andraikitra raha tsy azo ampiharina ny Serivisy fanampiny. Ny andraikitry ny FIDULINK mikasika ny Serivisy fanampiny dia voafetra tanteraka amin'ny fisafidianana, torolàlana ary fanaraha-maso ireo mpiara-miasa aminy na antoko fahatelo hafa.
Hahatratra hatrany amin'ny 12.4. Izay simba na fatiantoka ateraky ny fampiasana serivisy paositra, telegrafy, telex, facsimile, telefaona, ary fitaovam-pifandraisana na fitaovam-pitaterana, ary fatiantoka manokana vokatry ny fahatarana, tsy fahazoan-kevitra, fahasimbana, ny fampijaliana ataon'ny ankolafy fahatelo na ny fanaovana dika mitovy ny kopia dia andraikitry ny Mpanjifa raha tsy efa nanao tandrevaka lehibe i FIDULINK.
12.5. Ny FIDULINK dia tsy azo raisina ho tompon'andraikitra raha misy tsy fahombiazan'ny iray amin'ireo fitaovam-pifandraisana ilaina amin'ny fanatanterahana ny serivisy omena ao amin'ny Contract, na ho an'ny mailaka na antso voaray ao anatin'ny lamin'ny serivisy omena ao amin'ny Contract. Ny FIDULINK dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fahaverezana na fahasimbana nateraky ny fampiasana na ny fax amin'ny torolàlana, ao anatin'izany ny toerana tsy nahombiazan'ny fandefasana, dia tsy feno na very.
12.6. Amin'ny tranga manokana fanokafana kaonty Banky, FIDULINK dia miasa amin'ny antoko fahatelo amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny Banky sy ny mpanjifa. Vokatr'izany dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny Banky sy ny mpanjifa ny FIDULINK. FIDULINK dia tsy manan-kery hiasa ary tsy mihambo ho mpiasa, solontena na mpikambana ao amin'ny fitantanana ny Banky ary / na hanao sonia amin'ny anarany na hanan-trosa na iza na iza ao amin'ny anaran'ny banky.
Faharetana, famaranana ary fampiatoana ny serivisy
13.1. Izay fifanarahana rehetra dia maharitra amin'ny fe-potoana voatondro ary avy eo havaozina ho azy mandritra ny vanim-potoana nifandimby mitovy amin'ny halavan'ny faharetan'ny voalohany. Ho an'ny lafiny hafa rehetra, ny fifanarahana rehetra dia havaozina ho azy eo ambanin'ny fe-potoana sy fepetra mitovy. FIDULINK na ny Mpanjifa dia afaka manafoana ny fifanekena rehetra amin'ny fe-potoana voalaza ao, na amin'ny faran'ny fotoana fanitarana na fanavaozana, amin'ny alàlan'ny fanomezana fampandrenesana roa volana farafahakeliny ho an'ny ankolafy hafa. Ny famaranana dia tsy misy fanavakavahana ny zon'ny antoko na ny adidy, mipoitra alohan'ny famaranana na mipoitra momba ny fihetsika na lesoka natao talohan'ny famaranana. Ny zon'ny famaranana eo noho eo noho ny antony ara-drariny dia voatokana.
13.2. Raha sendra misy fanitsakitsahana ny mpanjifa ny lalàna mifandraika na amin'ireto Fepetra sy fampiasa amin'ny ankapobeny sy / na General ireto, ny FIDULINK dia afaka mamarana ny fifanarahana sy serivisy misy vokany eo noho eo, ao anatin'izany ny fifanarahana ho an'ny serivisy fanampiny natolotry ny orinasa mifandraika amin'ny FIDULINK. Na avy amin'ny antoko fahatelo. Amin'ny tranga toy izany dia tsy maintsy mandray ny fepetra ilaina rehetra ny Mpanjifa mba hisolo toerana misy toerana banga ao amin'ny orinasa aorian'ny famaranana toy izany ary nifanarahana mazava tsara fa ny FIDULINK dia tsy azo tompon'andraikitra amin'ny fahasimbana aorian'ny famaranana eo noho eo.
13.3. Izay fifanarahana amin'ny fiasan'ny orinasa dia manan-kery mandritra ny herintaona. Raha toa ka mamarana ny fifanarahana ny Client na mangataka an'i FIDULINK hamindra ny fitantanana ny orinasa amin'ny mpandraharaha hafa na mpanome serivisy orinasa na hanafoanana ny orinasa dia tsy hamindra na hanafoanana ny orinasa ny FIDULINK mandra-pahatongan'ny rehetra. fandoavam-bola miavaka, ny fandaniam-bola rehetra sy / na ny sarany (ao anatin'izany fa tsy voafetra amin'ny hetra, hetra, haba ary fandoavam-bola hafa amin'ny antoko fahatelo ary koa sarany mifandraika amin'ny talen'ny mpitantana na tompon'andraikitra. ary ny sarany famindrana € 750,00) dia efa voaloa tanteraka.
Raha vantany vao ampidirina sy voasoratra ao amin'ny fahefana mifandraika amin'izany ny orinasa, dia manao sonia fifanarahana maso ivoho ny mpanjifa. Raha tsy mahomby izany dia manana zo handà tsy handefa any amin'ny Mpanjifa ny antontan-taratasy sosialy mifandraika amin'ny orinasa ny FIDULINK raha toa ka tsy soniavin'ny Mpanjifa ny fifanarahana mandat voalaza etsy ambony.
Ny mpanjifa dia hahazo famerenam-bola feno amin'ny saram-panafahana, kely kokoa ny vidin'ny mpandefa entana, raha feno ireto fepetra telo manaraka ireto: (i) FIDULINK dia tsy afaka mamorona orinasa ho an'ny mpanjifa AND (ii) FIDULINK dia nahazo ny rehetra ireo antontan-taratasy ilaina izay vitan'ny Mpanjifa, araka ny tokony ho izy, ao anatin'izany ny kopian'ny antontan-taratasy maha-marina ny mpanjifa izay voamarina araka ny torolàlana manokana an'ny Fifanarahana momba ny fahazotoan'ny Banky Soisa sy izay antontan-taratasy angatahina amin'ny Mpanjifa avy amin'ny FIDULINK, toy ny faktiora manokana tsy mihoatra ny 3 volana, vita vita amin'ny fandaharam-pianarana ary taratasy fanovozan-kevitra avy amin'ny banky AND (iii) ny fangatahana famerenam-bola dia natolotra tao anatin'ny 60 andro taorian'ny ny fandoavana ny vidin'ny lalàm-panorenana ny mpanjifa.
13.4. Ny serivisy dia mifarana amin'ny fisokafan'ny Banky ny kaonty ary avy eo ny fifandraisana rehetra dia eo amin'ny Client sy ny Banky.
Ny mpanjifa rehetra dia mety manapa-kevitra ny hanafoana ny fangatahany ao anatin'ny 3 andro kalandrie taorian'ny fangatahany hanokatra kaonty amin'ny banky. Ny Client dia hahazo famerenam-bola feno amin'ny saram-pametrahana, kely kokoa ny vidin'ny mpandefa entana, raha feno ireto fepetra telo manaraka ireto: (i) Ny Banky, ampian'ny FIDULINK, dia tsy afaka misokatra ho an'ny ny Mpanjifa kaonty ARY (ii) FIDULINK na ny Banky dia nahazo ny antontan-taratasy ilaina rehetra izay nofaranan'ny Mpanjifa ara-dalàna, ao anatin'izany ny kopian'ny antontan-taratasy momba ny mombamomba ny mpanjifa izay voamarina mifanaraka amin'ny torolàlana mazava momba ny fifanarahana mifandraika amin'ny adidin'ny zotram-po any Swiss banky sy izay antontan-taratasy angatahina amin'ny Client amin'ny alàlan'ny FIDULINK, toy ny, saingy tsy voafetra amin'ny fanambarana kaonty amin'ny carte de crédit, faktiora ilaina, fifanarahana asa, taratasy fanamarinana fampidirana na 'porofo hafa momba ny fihavian'ny toekarena. Ity ihany no tranga atolotra ny famerenam-bola. Tsy misy vola averina, na inona na inona antony, raha manapa-kevitra ny mpanjifa ny hanafoana ny fangatahany aorian'ny andro kalandrie 3.
Fomba entina mandoa vola
13.5. Ny famerenam-bola rehetra dia azo atao amin'ny alàlan'ny fomba fandoavam-bola mitovy amin'ilay ampiasaina amin'ny fandoavam-bola mankany FIDULINK.
Raha misy fehintsoratra ao anatiny izay mety na nanjary, teo ambanin'ny lalàna an-tsoratra, na heverin'ny fitsarana na rafi-pitantanana na fahefana manan-kery ho tsy ara-dalàna, tsy manan-kery, voarara na tsy azo ampiharina, dia heverina ho tsy miasa izany fehezan-dalàna izany. hatrany amin'ny tsy fetezan'ny lalàna, ny famafana, ny tsy fahamendrehana, ny fandrarana na ny tsy fampiharana. Ireo andininy hafa dia hijanona ho manan-kery.
Ho an'ny fanatanterahana ny serivisy, FIDULINK dia manan-jo hanakarama subcontratorsurs izay ho eo ambany fahefany: Mpisolovava, Jurist, Accountants, Accountants Chartered, Auditors Statutory and Agents Incorporation of the FiduLink Network .com. Ny zony sy ny adidin'ny Mpanjifa vokatry ny fifanarahana dia azo afindra amin'ny ankolafy fahatelo miaraka amin'ny faneken'ny FIDULINK an-tsoratra.
Io fifanarahana io dia tanterahina ary apetraka mifanaraka amin'ny lalàna britanika. Ny tsy fitovian-kevitra misy eo amin'ny roa tonta mifandraika amin'ny fifanarahana, anisan'izany ny resaka famaranana, ny maha-mety azy na ny famaranana azy, dia miankina amin'ny fahefan'ny Suxys Ltd, izany hoe ny fitsarana any Londres ao amin'ny Fanjakana Mitambatra.